Global Voices teny Malagasy » Mangataka fanafahana ilay mpikatroka Alaa Abd El Fattah ny mpanohana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Oktobra 2021 5:32 GMT 1	 · Mpanoratra Ellery Roberts Biddle Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Tandindomin-doza ny ain'ilay bilaogera sady mpikatroka ejipsiana Alaa Abd El Fattah . Rangahy 39 taona nigadra tamin'ny taona 2019 noho ny fiampangana ho manaparitaka vaovao diso, saingy, na eo aza ny fetra napetraky ny lalàna ejipsiana, dia mbola tsy niakatra fitsarana izy.
Zatra miteny amin'ny fanohanana ny teknolojia misokatra ahafahan'ny tsirairay miteny malalaka, ary nanana ny feony malaza nandritra ny fitroarana Arabo tamin'ny taona 2011, nigadra na nanaovana famotorana hatrany i Abd El Fattah teo ambany fitondran'ny filoham-pirenena ejipsianina rehetra nandalo tamin'ny androm-piainany. Nosamborina  izy tamin'ny taona 2006 satria nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana am-pilaminana. Tamin'ny 2011, nandany roa volana an-tranomaizina  izy, tsy nahatratra ny nahaterahan'ny zanany lahy, Khaled. Tamin'ny 2013, nosamborina  sy notazonina nandritra ny 115 andro izy nefa tsy notsaraina, talohan'ny nigadrany dimy taona, ary avy eo nahazo didim-pitsarana sazy miantona dimy taona fanampiny, izay nanerena azy handany isak'alina tao amin'ny biraon'ny polisy ao an-toerana.
Volana maromaro tao anatin'ity vanim-potoana fizahan-toetra ity, nosamborina indray  izy noho ny fiampangana ny fanaparitahana vaovao lainga sy ny fidirany amina fikambanana mpampihorohoro. Notazonina tao amin'ny zoro fiarovana farany ambony tao amin'ny fonjan'i Tora izy, saingy mbola tsy natolotra ny fitsarana. Tamin'ny volana aprily 2020 dia nanao fitokonana tsy hihinan-kanina  izy nandritra ny telo herinandro. Tamin'ny 29 septambra 2021, nihoatra ny fe-potoana voafetra voafaritra ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ao Ejypta ny fotoana nihazonana azy mialoha ny fitsarana. Nefa mbola any am-ponja ihany izy.
Tao anaty fanambaràna navoaka tao amin'ny Facebook , nanao fangatahana ho fiarovana azy sy ho famotsorana azy ny fianakaviany:
Nanatevin-daharana ireny vondrona ireny ny Global Voices, sy ny fikambanana iraisampirenena toy ny Amnesty International , ny Committee to Protect Journalists , ary ny Electronic Frontier Foundation  amin'ny antso.
Ampirisihanay ihany koa ny mpanohana hanao komandy ny bokiny hoavy, “You Have Not Yet Been Defeated” [Mbola tsy resy ianao]. Eny, na dia eo aza ny didy mihatra aminy, nanoratra andian-dahatsoratra i Abd El Fattah raha tany am-pamonjana ary nangonina sy nahitsin'ny mpamoaka boky mahaleotena Fitzcarraldo Editions ao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK). Nokasaina hivoaka voalohany  amin'ny 20 Oktobra 20, tafiditra ao anatin'ny amboara ny teny fampidirana nataon'ilay mpanoratra Kanadiana sady mpikatroka ara-tsosialy Naomi Klein.
Hita ao anatin'ny boky ihany koa ny sasany amin'ireo izay vao nosoratan'i Abd El Fattah ho an'ilay haino vaky jery mahaleotena ejipsiana Mada Masr. Ao amin'ireny asa-soratra ireny, mitondra ny lohateny hoe “Our bodies and enmity: A personal introduction,”  [Ny vatantsika sy ny fandrafiana: fampidiran'ny tena manokana] no nanoratany ny “tantara” -ny vatan'ireo gadra sy ny eritreritra amin'ny fiantraika lalin'ny fifehezan'ny fanjakana ny vatany:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/10/07/154446/
 nandany roa volana an-tranomaizina: http://www.hrw.org/news/2011/11/15/egypt-free-blogger-held-maspero-case
 nosamborina indray: https://www.madamasr.com/en/2019/09/29/news/politics/writer-and-activist-alaa-abd-el-fattah-arrested-from-police-probation/
 nanao fitokonana tsy hihinan-kanina: https://www.apc.org/en/news/egyptian-alaa-abdel-fattah-hunger-strike-protest-conditions-prison-amid-pandemic
 fanambaràna navoaka tao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/Monasosh/posts/10159375094099454
 Nokasaina hivoaka voalohany: https://www.freedomfor.network/